लिकस्टेन एक सानो यूरोपीय देश हो, विश्वको सबैभन्दा सानो र युरोपको चौथो सबैभन्दा सानो हो। यद्यपि जनसंख्या संख्यामा प्रभावशाली छैन भन्ने तथ्यको बाबजुद यो देश भावुक जुवाडेले भरिएको छ। के यहाँ जूवा कानूनी छ? यो कानूनी हो, तर यो कडाइका साथ नियमन गरिएको छ। यसबाहेक, लीचेन्स्टीनका लागि कानुनी अनलाइन क्यासिनोहरू छैनन्।
यद्यपि यो समस्या होइन किनभने त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई विदेशबाट सञ्चालित अनलाइन क्यासिनोमा जूवा खेल्न अनुमति दिइन्छ, र त्यसो गरेकोमा उनीहरूलाई सताइँदैन। र किनभने लिक्टेनस्टेन वास्तवमै त्यहाँको धनी देशहरू मध्ये एक हो, अन्तरराष्ट्रिय रूपमा काम गर्ने धेरै वेब क्यासिनोमा स्थानीय पन्टर्सको धेरै स्वागत छ। अर्को शब्दहरुमा, एक अनलाइन क्यासिनो Liechtentein Liechtentein बाट खेलाडीहरु लाई स्वीकार गर्न को लागी समस्या छैन; त्यहाँ दर्जनौं छन्।
शीर्ष १० लिचेन्स्टीन अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
शीर्ष १० लिचटेनस्टाइन अनलाईन क्यासिनो साइटहरूको बारेमा एक विशाल बोनसको साथ!
Lichtentein सबैभन्दा सानो यूरोपीय देश हो। देश वास्तवमा भूमिहीन माइक्रोस्टेट हो र जनसंख्याको बहुमत जर्मन बोल्छ। यो देश धेरै युरोपेली देशहरू मध्ये एक हो जहाँ जुवा खेल्नु वैधानिक छ। वास्तवमा दुई ठूला जुवा सुविधाहरू भएका शहरहरू छन् जसले कानूनी रूपमा लिक्टेन्स्टेनका नागरिकहरूलाई उनीहरूको सेवाहरू प्रदान गर्न सक्दछ। यो नोट गर्नुपर्दछ कि लिचटेनस्टेनमा जुवा कानूनी छ, तर लिष्टन्टेनको रियासतले पनि कडाईका साथ नियमन गरेको छ।
जब यो Lichtentein मा अनलाइन क्यासिनो उद्योग को लागी आउँछ, यो अझै विनियमित छ। जग्गामा आधारित जुवा २०० in मा पूर्ण रूपमा कानुनी भयो, अनलाइन क्यासिनो अपरेटरहरूको लागि अवस्था एकदम भिन्न छ। भाग्यवश Lichtentein बाट खेलाडीहरु को लागी, तिनीहरू धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन क्यासिनो द्वारा स्वीकार्य छन्।
Lichtentein बाट अनलाइन क्यासिनोहरू खेलाडीहरू
त्यहाँ लगभग तीन सय अनलाइन क्यासिनो स्थलहरू छन् जसले लिचन्स्टेनबाट खेलाडीहरू स्वीकार गर्दछन्। किनकि देश EEA सदस्यहरू मध्ये एक हो, यसको मतलब यो हो कि अरू केही EEA क्षेत्रहरूमा सीमापार जुवा कानूनी छ। क्रम शव्दहरूमा, लिचन्स्टेनका खेलाडीहरूले कुनै जोखिमविना दर्ता गर्न र विदेशी अनलाइन क्यासिनोहरूमा उनीहरूको मनपर्ने अनलाइन क्यासिनो खेलहरू खेल्न सक्छन्।
यी प्रकारका अनलाइन क्यासिनोहरूले लिचटेन्स्टेइनबाट खेलाडीहरू स्वीकार गर्दछन् जसले सामान्यतया दुबै स्विस फ्र्यान्क र यूरो दुवै स्वीकार गर्दछन् जसको अर्थ हो कि खेलाडीहरूले विनिमय शुल्कको चिन्ता नगरिकन आफ्नै मूल मुद्रामा वास्तविक पैसा गेमहरूको मजा लिन सक्छन्। यो पनि नोट गर्नुपर्दछ कि Lichtentein बाट खेल्ने अनलाइन क्यासिनोहरू प्राय: अंग्रेजीमा अ .्ग्रेजीमा पनि उपलब्ध छन्।
लिक्टेन्स्टिनमा अनलाइन क्यासिनो
लामो समयको लागि, लिचेन्स्टाइनमा जूवा पूर्ण रूपमा अवैध थियो। १ th औं शताब्दीको अवधिमा यो सानो रियासतले खराब वित्तीय अवस्था सामना गरिरहेको थियो र संसदले यी गतिविधिहरूलाई कानुनी बनाउन कोष जम्मा गर्न चाहेको थियो। यद्यपि, Liechtentein को राजकुमार अस्वीकार र theण आफै भुक्तान गर्नुभयो, सट्टामा। अर्को वर्षहरूको माध्यमबाट, अपरेटरहरूले मुलुकमा क्यासिनो स्थापना गर्न प्रयास गरे, सधैं व्यर्थमा भने।
तर २०० since पछि अल्पाइन राष्ट्रले जग्गामा आधारित सबै किसिमका जमिनहरू नियमित गरेको छ। र अगस्ट २०१ of सम्म, त्यहाँ दुई ईंट र मोर्टार क्यासिनोहरू छन्, रग्गेलमा क्यासिनो एडमिरल र क्यासिनो शान्वाल्ड। यद्यपि हालसालका नियमहरू लाइचन्सटेनमा अनलाइन क्यासिनो साइटहरूमा अझै लागू गरिएको छैन।
लिचेन्स्टाइनमा अनलाइन जुवा कानून र नियमहरू
लीचेन्स्टेनर अनलाइन जुवा कानूनहरू अब प्रस्ट छैन र निकट भविष्यमा परिवर्तन हुनसक्दछ, भर्खरको समाचारका अनुसार। जे होस्, ती खेलाडीहरूले देशका नियमहरू थाहा पाउनु आवश्यक छ उनीहरूले जूवा खेल्दैछन् त्यसैले यो भाग लिचटेन्स्टेनमा अनलाइन जुवा उद्योग र विशेष गरी लिच्टिनस्टेनमा अनलाइन जुवा कानूनमा रुचि राख्नेहरूका लागि हो। हामीले छोटो प्रश्न र उत्तरहरूको रूपमा अनलाइन जुवा लिचेन्स्टीन कानूनको व्याख्या गरेका छौं ताकि तपाईले लिचेन्स्टेन अनलाइन जुवाको बारेमा धेरै जान्न आवश्यक पर्ने सबै छिटो सिक्न सक्नुहुनेछ।
के भूमिमा आधारित जुवा लीचेन्स्टेनमा कानुनी हो?
हो, देशको कानून बमोजिम, यो ईंट र मोर्टार CHF क्यासिनो संचालन गर्न कानूनी हो। जुवाको वैधानिकताको बाबजुद, हालै सम्म लिचेन्स्टाइनमा एउटा क्यासिनो आएको छैन। गर्मी २०१ 2017 मा, क्यासिनो रग्गलमा निर्माण हुने घोषणा गरियो। क्यासिनो एडमिरलले स्लट मेसिनहरूबाट खेलहरूको सभ्य संख्या प्रदान गर्दछ Baccarat र पोकर हो र भनिन्छ नयाँ पर्यटकहरुलाई देश आकर्षित गर्न। यदि चीजहरू यसमा राम्रोसँग जान्छन् भने, हामी नयाँ क्यासिनोहरूलाई भविष्यमा लिचेन्स्टेनमा खोल्न आशा गर्न सक्छौं।
के Liechtentein मा अनलाइन जुवा अनुमति छ?
लिचटेन्स्टाइनमा अनलाइन जुवा कानूनहरू भूमिमा आधारित जुवा सम्बन्धी कानूनहरू जत्तिकै स्पष्ट छैन र सामान्यतया लिचन्स्टेनमा अनलाइन जूवा स्पष्ट रूपमा नियमन गरिएको छैन। २०१ 2016 मा, लिक्टेनस्टेनको अनलाइन जुवा प्राधिकरणले कानूनमा संशोधन पारित गर्‍यो जसले लिक्टेनस्टेन खेलाडीहरूलाई वैध अनलाइन क्यासिनोहरूलाई लिचेन्स्टेनमा कानूनी अनलाइन जुवा इजाजतपत्रको लागि आवेदन दिन र आधिकारिक रूपमा उनीहरूको सेवाहरू प्रदान गर्न अनुमति दिने थियो। यस तथ्यको बावजुद, लिचेन्स्टाइनमा अझै कानुनी अनलाइन क्यासिनोहरू छैनन् र कसैले पनि इजाजतपत्रको लागि आवेदन भने लिएको छैन। तर यसको मतलब यो होइन कि खेलाडीहरूले द लिचटेन्टीनर अनलाइन क्यासिनोमा सबै बेट्स बनाउन सक्दैनन्। भाग्यवस, लिच्टिनस्टाइन बाहिरका सर्वश्रेष्ठ अनलाइन जुवा साइटहरू लिच्टेनटाइनरहरू र उनीहरूका पैसाहरू स्वीकार गर्न पाउँदा खुशी छन्। त्यसोभए जबकि अनलाइन जुवा लिचेन्स्टेन स्पष्ट रूपमा कानूनी छैन, तपाईं बोनसबाट सुरक्षित अनलाइन क्यासिनो लिच्टिनस्टेन लिन सक्नुहुन्छ। लिचेन्स्टेनमा प्रतिष्ठित अनलाइन क्यासिनोहरूको एक्सप्रेस सूची।
लिचेंस्टाइनमा अनलाइन जुवा उमेर कति हो?
सुरक्षित ऑनलाइन अनलाइन लिamb्कस्टेनमा जूवा प्रयोग गर्न वा केवल निर्मित ल्याण्ड-आधारित क्यासिनोमा उत्तम बनाउनको लागि, खेलाडी कम्तिमा १ 18 वर्षको हुनुपर्छ। धेरै जसो अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन क्यासिनोको समान उमेर सीमा हुन्छ तर केहिले यसलाई २१ सम्म बढाउन सक्दछन्।
दुई शब्दहरुमा, अनलाइन क्यासिनो Liechtentein कानूनी प्रकारको छ तर कानून अस्पष्ट छ र अझै कुनै लाइसेन्स क्यासिनो छैन। लिचेन्स्टाइनमा वास्तविक पैसाको लागि अनलाइन क्यासिनोमा खेल्ने एक मात्र तरिका भनेको लिचेन्स्टेनबाट खेलाडीहरूलाई स्वीकार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जुवा वेबसाइट खोज्नु हो।
प्रत्यक्ष-विक्रेता खेलहरूको बारेमा के हुन्छ?
यदि तपाईंसँग अनलाइन क्यासिनोहरूमा कुनै अघिल्लो अनुभव छ भने तपाईंसँग लाइभ गेमहरू के हुन् र उनीहरू किन खेलाडीहरू बीच यति लोकप्रिय छन् भन्ने बारेमा राम्रो विचार हुनुपर्छ। र तपाईं को लागि जो कुल newbies यहाँ छोटो विवरण छ। प्रत्यक्ष-डीलर गेमहरू, जस्तो कि तपाईं सम्भवतः नामबाट बताउन सक्नुहुन्छ, अनलाइन क्यासिनो सफ्टवेयरको एक प्रकार हो जुन अन्तिम रिमोट क्यासिनो अनुभव सिर्जना गर्नको लागि कम्प्युटर ग्राफिक्स र भिडियो लाइभ-स्ट्रिमहरू संयोजन गर्दछ। तिनीहरू कुनै पनि ठूलो अनलाइन स्थलको लागि निरपेक्ष आवश्यकता भएको छ र अब क्यासिनो खेलहरूको सब भन्दा लोकप्रिय कोटिहरू मध्ये एक हो। र सबै भन्दा राम्रो पक्ष के छ कि Liechtentein मा सबै भन्दा राम्रो अनलाइन क्यासिनो साइटहरुमा तिनीहरु प्रशस्त छ।
मोबाइल अनुकूलता र उत्तम वास्तविक पैसा अनुप्रयोगहरू
समय मा यस बिन्दु मा, तपाईं पढ्न वा बयान सुन्न आदी हुन पर्छ 'मोबाइल जुवा अनलाइन जुवाको भविष्य हो', तर धेरैलाई भविष्य पहिले नै हो भनेर महसुस भएन। हामी साँच्चिकै डिजिटल युगमा बाँचिरहेका छौं र हाम्रो जेब उपकरणहरू हामीसँग जहाँसुकै गए हामीसँग छ, हामीले तिनीहरूमा फ्याँकिएको कुनै कार्य पूर्ण गर्दछ। यसैले, यो स्वाभाविक मात्रै थियो कि त्यस्तो समय आउनेछ जब जुवा खेलाडीहरूले आफ्ना स्मार्टफोनहरू र ट्याब्लेटहरूलाई ठूला र हार्ड डेस्कटपहरूमा प्राथमिकता दिन्छन्।
यही कारणले गर्दा लिक्टेनस्टेनमा सर्वश्रेष्ठ अनलाइन क्यासिनोहरूको लागि हाम्रो मुख्य मापदण्ड यो हो कि तिनीहरू पूर्ण रूपमा मोबाइल उपयुक्त छन्। यो एक शब्द हो जुन तपाईंले निश्चित रूपमा सुन्नुभएको छ, तर हुनसक्छ तपाईं पूर्ण रूपमा बुझ्नुहुन्न। तपाईंलाई चीजहरू खाली गर्न मद्दतको लागि, हामीले मुख्य सुविधाहरूको सर्टलिस्ट समावेश गरेका छौं जुन हामी एक राम्रो मोबाइल क्यासिनोमा हेर्न चाहन्छौं। यसका साथै हामीले एउटा टेबल पनि समावेश गरेका छौं जुन के देखिन्छ त्यो लिचेन्स्टेनमा सब भन्दा राम्रो मोबाइल-मैत्री क्यासिनो साइटको साथसाथै कार्यक्रम स्थलको बारेमा केहि महत्त्वपूर्ण विवरणहरू पनि देखाउँदछ।
GamesPerformanceiOS र एन्ड्रोइड कम्प्याटिबिलिटीबोनस अफरको संख्या
शीर्ष १० लिचेन्सटेन अनलाइन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: जुन 4, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० लिचेन्स्टीन अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० लिचटेनस्टाइन अनलाईन क्यासिनो साइटहरूको बारेमा एक विशाल बोनसको साथ!
2 Lichtentein बाट अनलाइन क्यासिनोहरू खेलाडीहरू
3 लिक्टेन्स्टिनमा अनलाइन क्यासिनो
4 लिचेन्स्टाइनमा अनलाइन जुवा कानून र नियमहरू
5 के भूमिमा आधारित जुवा लीचेन्स्टेनमा कानुनी हो?
6 के Liechtentein मा अनलाइन जुवा अनुमति छ?
7 लिचेंस्टाइनमा अनलाइन जुवा उमेर कति हो?
8 प्रत्यक्ष-विक्रेता खेलहरूको बारेमा के हुन्छ?
9 मोबाइल अनुकूलता र उत्तम वास्तविक पैसा अनुप्रयोगहरू
शीर्ष १० लिचेन्स्टीन अनलाइन ...